100 Polyester Naqshad Dhuxusha Qalabka & Shirkadda Shiinaha
Shirkadda Polyester iyo Naqshad Sifeynta
MH Dukumiinnada oo ay ka mid yihiin: Spun Polyester Naqshad Dhuxul, Dhuxul Jilicsan / Dhuxul Cajalad Dhuxul, Dharka Dhuxul Cufan / Dhuxul Cufan, Dhuxul Shucaac Nacnac, Daboolka Daboolka Suufiska, 100% Polyester High Tenacity Thread, Nylon High Tenacity Thread, 100% Nylon Bond Mawduuc Dhaqdhaqaaq Dhaqdhaqaaq Dhaqdhaqaaq Dhaqdhaqaaq Dhaqdhaqaaqa Dhaqdhaqaaqa Dhaqdhaqaaqa Dhaqdhaqaaqa Dhaqdhaqaaqa, 100% Nylon Bond Thread.
Awoodda Awoodda Sanadka: 30000 ton
Midabka: kaadhka midabka leh midabka 400 ee la heli karo, qadar yar oo la aqbali karo
20 / 2 Jeans, kabo, xargaha, alaabta maqaarka, iwm.
20 / 3 Jeans, kabo, boorsooyin yaryar, alaabta maqaarka, iwm.
30 / 2 Farshaxanada farshaxanka, shandadaha gacmaha, suxufiyiinta ilaalinta, iwm.
30 / 3 Jeans, teendhooyin, alaabta maqaarka, boorsooyinka, kabaha, iwm.
40 / 2 Kabo, jaakad, suits, shaati, iwm.
40 / 3 Xeeladaha badbaadada, farshaxan farshaxan, kabo, iwm.
50 / 2 Dharka dharka, dharka, dharka, iwm.
50 / 3 Farshaxanada farshaxanka, dharka qurxinta, dharka garoonka, iwm.
60 / 2 Muraayadaha ultrathin, dharka gogosha, dharka dharka, iwm.
60 / 3 Coats, suits, suunka, sariiraha sariiraha, bustayaal, iwm.
80 / 2 Diyaarinta dharka iyo xirashada dharka
80 / 3 Dharka gogosha, dharka dharka, dharka oo dhan, iwm.
Kharashka dhar alwaaxku wuxuu ka yar yahay 1% dhammaan alaabta dharka, laakiin waa qayb muhiim ah oo lagu go'aamiyo tayada alaabta. Ma jiraan wax yar oo ku jira dhar jilicsan. Qalab kasta oo dharka jilicsan wuxuu sababi karaa qashin badan oo kharashka ku baxa. Qiimaha dharka dhoobada wuxuu ka yar yahay 1% dhammaan alaabta dharka, laakiin waa qayb muhiim ah oo lagu go'aamiyo tayada alaabta. Ma jiraan wax yar oo ku jira dhar jilicsan. Cilad kasta oo ku jirta dunta dharka ayaa sababi karta qashinka waaweyn, dharka, mashiinka dharka iyo shaqada. Sidee loo doortaa nambarka dhoobada midig?
Xeerarka qeexaya dhadhanka sarraysa ee sigaarka waa:
Ma jirto burbur fara badan oo dhejis ah
Sameynta qaabka isweydaarsiga
Meelo aan la tuurin
Xasaasiyadda, si looga hortago isbeddelka xiisadda inta lagu jiro tolidda
Heer sare oo ah iska caabin adag
Si sahlan oo muuqaal leh, si sahal ah u dhex mara hagayaasha mashiinka
Sidee loo gaaraa shuruudaha tayada kor ku xusan?
Tayada suufka cayriin
Fure u ah hagaajinta tayada dharka jilitaanka waa khafiifka qiiqa loo isticmaalo, sababtoo ah haddii khatarta qoyan ay tahay mid qaldan, way adagtahay in la hagaajiyo tayada habka dhirta iyo geedi socodka. Dharka suufka ah, cilladda, timo xumada ayaa saameyn weyn ku yeelan doonta tayada dharka jilicsan, sidoo kale waa qodobka ugu muhiimsan ee saameeya burburka nuqulku.
Qalabaynta dharka iyo nidaamka qalajinta, ma'aha kaliya oo aan ka fiirsano isbeddelka midabka iyo midabka midabka, sidoo kale waxaan ka daalacnaa qaabka istiraatiijiga ah ee dhogorta xambaarsan taas oo saameyn doonta tayada dib u celin hawleedka. Maaddaama cirbadaha suufka ku habboon uu yareeyn doono qashinka jaban inta lagu gudajiro.
Qaab qalooca wanaagsan waa mid aad muhiim u ah ciriiriga inta lagu jiro jadwalka. Wajiga dunta waa la jebin karaa xilliga xawaaraha sare ee dharka, qayb ka mid ah sababtu waa sababta oo ah qalalaasaha aan la isku haleyn karin waa mid aan loo dhigin, sidaas awgeed waa wax aad u degdegsan ama aad u gaabis ah, waxay sababi kartaa nalalka jebiya marka qalalkiisu aad u gaabiyo, ayaa naga horjoogsan lahaa marka cayrtu ay tahay mid deg deg ah, waxay sidoo kale u horseedi doontaa nalalka burburay.
Wixii dhar jilicsan, waa habka muhiimka ah ee saliidda dhoobada. Waxaan leenahay mashiinka ugu caansan ee SSM TK2-20CT, wuxuu leeyahay aaladda shidaalka ee Lubetex si ay u saliiddo, iyaga oo hawlaha kululeynaya hal xargo, kaas oo si fiican u dhimi kara waxtarka. sidaa darteed dhedigga ayaa si buuxda u dabooli kara saliida saliidda iyo helitaanka sicir shidaal oo dheeri ah.
Shirkaddayadu waxay leedahay qalab tijaabo ah oo lagu tijaabinayo, waxa loo isticmaali karaa in lagu simo saameynta dharboonka ka hor intaan la keenin, taas oo hubinaysa saamaynta isticmaalka macaamiisha.
MHM wiishka ayaa yarayn kara tirooyinka jajabyada jajaban, si ay u hagaajiyaan tayada wax soo saarka, si loo hagaajiyo wax soo saarka wax soo saarka iyo in la yareeyo qiimaha wax soo saarka. Itwill waxay sidoo kale hoos u dhigtaa xoogga shaqaalaha iyo qanacsanaanta shaqaalaha.